Vipassana Meditation Archives - TGuff
कसरी पाउने सुख-शान्तिको जीवन ?
Thu Aug 160Comments
को चाहँदैन सुख–शान्तिको जीवन ? पद, पैसा, वा बौद्धिक चार्मको अधिकतम तागत कति हो? के यी विषयहरूले आनन्द उत्पादन गर्न सक्छन् ? मानव स्वभाव बदल्न सक्छन्? यो अनुभव लेख एप्पलका पूर्व सीइओ तथा गृहस्थ सन्त स्टिभ जब्सको यो टिप्पणीबाट सुरु हुन्छ– ‘चिहानमा सबै भन्दा धनी मानिस हुनुले मेरो लागि केही अर्थ राख्ने छैन।’
Spirituality 10-dyas-vipassana-dhayan vipassana-meditation %e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%a8%e0%a4%be